यसरी फसिन फेसबुकबाट सम्झना | Namastepost.com
यसरी फसिन फेसबुकबाट सम्झना
फेसबुकमा आइलागेको विदेशीसँगको कुरा नबुझी आर्थिक कारोबार गर्दा हुनेखाने परिवारका महिला नै फन्दामा परेका छन् । ठग्ने कहाँ छ कहाँ ? ठगिनेहरू प्रहरी हिरासतमा छन् ।
धादिङस्थित युथ फाउण्डेशनमा काम गर्ने सम्झाना श्रेष्ठ नाम परिवर्तनसँग फेसबुकमा आइलागेका थिए, जर्मन घर घई लण्डनमा कण्डक्टर इञ्जिनियर हुँ भन्ने केनी जोनसन । जनआस्था साप्ताहिकले समाचार छापेको छ । फ्रेन्ड रिक्वेष्ट आयो, सम्झनाले स्वीकार गरिन् । केही दिन म्यासेन्दरमा कुरा हुँदा केनी सामान्य रुपमै प्रस्तुत भइरहेका थिए । तर, केही दिनपछि सम्झानाको नेपालको ठेगाना मागे । किन ? भनी सोध्दा ‘म पनि नेपाल आउँछु ।
नेपालमा मलाई एउटा घर किनिदेउ । तिमीलाई पैसा र राम्रो राम्रो गिफ्टहरू पठाउँछु । जर्मन घुम्न लान्छु’ भन्ने जवाफ पाइन् । अरु त यस्तै उस्तै हो, गिफ्ट नै पठाउँछ भने ठेगाना दिएर के नै बिग्रिएला भनी ठेगाना पठाइन् । केही दिनपछि केनीले खबर ग¥यो, सामान दिल्लीमा आएको छ भनेर । एउटा कार्टुनमा विभिन्न गिफ्ट आइटम र ५० हजार पाउण्ड पैसा छ भन्यो । त्यो सामान पाउन भारतमा पाँच सय अमेरिकी डलर पठाउनुपर्ने खबर आयो ।
५० हजार पाउण्ड हात लाग्छ भने पाँच सय अमेरिकी डलर के ठूलो कुरा भयो र रु सम्झनाले पठाउने के उपाय छ भनी सोधिन् । केनीले त्यहाँको कष्टम अफिसबाट फोन आउँछ भने । नभन्दै फोन आयो, भारतीय नम्बर ००९१९७१८७६७९४४ बाट । फोन गर्नेले, ‘म तपाईलाई नेपालको खाता नम्बर दिनछु’ नबिल बैंकमा रहेको रमिता महर्जनको ४६१००१७५०४४१९ पठाइदियो । नबिल बैंकको बानेश्वर शाखाबाट सम्झनाले उक्त खातामा ५४ हजार रुपियाँ जम्मा गरिन् ।
पैसा त हालियो, तर सामान आएन । किन आएन भनी सोधखोज गर्दा भारतीय नम्बरको मोबाइल रिसिभ गर्ने ती व्यक्तिले त्यति मैसा नपुग्ने भयो भन्दै नेपाली रुपियाँ एक लाख २७ हजार फेरि माग्यो । भोलिपल्ट बिदाको दिन । फेरि पर्सिपल्ट फोन आयो । चार प्रतिशत गभर्मेन्ट चार्ज लाग्छ । भन्दै दुई लाख ७९ हजार नेपाली रुपियाँ त्यही खातामा हाल्न भनियो । उनले त्यसै गरिन् । तर सामान आएन ।
पछि भारतीय नम्बर रिसिभ गर्ने उसले पाउन्ड साट्न तपाईलाई अप्ठेरो पर्छ । तयसैले म साटिदिन्छु’ भन्दै अरु पैसा माग्न थाल्यो । यसपछि सम्झनाले थप पैसा नडुबाउने निर्णय गरिन् । र, बुझिन् आफू ठगिएको कुरा । प्रहरीकहाँ गइन् । अनुसनधानबाट नबिल बैंकको खाता नम्बर प्रयोगकर्ता रमिता महर्जन फेला परिन् ।
उनी रहिछन् ठमेल घर भइ आठ कक्षा मात्रै पढेकी ३६ वर्षीया गृहिणी उनी पनि यसै गरी फसेकी । उनलाई एक वर्षअघि अस्बर टोनी कोल नाम भएको व्यक्तिले फेसबुकबाट ठगेको रहेछ ।